Fiatoana nitondra soa
(Mifototra amin'ny Asa. 12:25; Asa. 13:13; Asa. 15:36-41)
"Alao Marka, ka ento miaraka aminao, fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana izy."- 2 Tim. 4:11.
Niova fo ho amin'ny fivavahana kristianina ny renin'i Marka ary fialofana ho an'ny mpianatra ny antranony tany Jerosalema. (...) Nandritra ny iray tamin'ireo famartgiana nataon'ny apostoly tao amin'ny reniny no nilazan'i Marka tamin'i Paoly sy Barnabasy ny faniriany hiaraka amin'izy ireo amin'ny dia misionera ataony. Tsapany ny fahasoavan'Andriamanitra tao am-pony, ka naniry mafy ny hanokana manontolo ny tenany ho amin'ny asa fanompoana eo amin'ny filazantsara izy. (...)
Sarotra ny lalany, sady voahodidin'ny loza hatrany hatrany. Teo amin'ny tanana sy ny vohitra nolalovany, teo amin'ny lalambe mangina noteteziny, dia voahodidin'ny loza hita maso sy tsy hita maso izy. (...) Nefa efa nianatra ny hatoky ny herin'Andriamanitra mahavonjy i Paoly sy i Barnabasy. Feno fitiavana mafana ho an'ny fanahy eo am-pahaverezana ny fony. Mpiandry ondry mahatoky izy, mitady ny ondry very ka tsy nihevitra izay hampiadana ny tenany. Nanadino ny "izaho" izy, ka tsy nangozohozo rehefa vizana na noana na nangatsiaka. Zavatra iray loha ihany no tao an-tsainy - dia ny famonjena ireo izay naniasia lavitra ny vala. (...)
Tao no resin'ny tahotra sy. ny fahakiviana i Marka, ka nisy fotoana nisalasalany tamin'ny fikasany hanolo-tena amin'ny fony manontolo ho an'ny asan'ny Tompo. Tsy zatra zava-tsarotra izy ka nahakivy azy ny loza sy ny fihafiana teny an-dalana. (...) Mbola tokony hianatra ny hiatrika ny loza sy ny fanenjehana ary ny fahoriana amin-kerim-po izy. Raha nandroso ny Apostoly ka nitombo hatrany ny zava-tsarotra natrehiny, dia natahotra i Marka ka very ny herim-pony rehetra; nanda ny handeha lavidavitra kokoa izy ka lasa niverina ho any Jerosalema.
Izany fandaozana ny laharana izany no nahatonga an'i Paoly hanao fitsarana tsy misy fankasitrahana sy henjana an'i Marka indray mandeha. I Barnabasy kosa tetsy andaniny dia nirona ny hanala tsiny azy noho ny tsy fananany fanandramana. Nampitebiteby azy ny hialan'i Marka amin'ny asan'Andriamanitra; hitany mantsy fa nisy toetra manokana teo aminy izay nety hahatonga azy ho mpiasa mahasoa ho an'i Kristy. Taona maro taty aoriana dia nisy valiny sarobidy ny fikarakarany izay hahasoa an'i Marka, satria nanolo-tena tsy nisy fepetra ho an'ny Tompo ilay tovolahy, ka nirotsaka ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara tany amin'ny saha misy olana. Noho ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanabeazana feno fanandramana nataon'i Barnabasy, dia nanjary mpiasa manana ny lanjany izy. Taty aoriana dia vita fihavanana tamin'i Paoly i Marka ka noraisiny ho mpiara-miasa aminy izy. VM, tt. 147-150.